Spelling uye Grammar Tarisa Ne Grammarly | Martech Zone
Iyo Yakanyanya Grammar Checker yeMablog, Emails, Nharembozha neSocial Media
China, Gumiguru 8, 2020 Svondo, Kurume 7, 2021 Douglas Karr
Kana iwe wanga uri muverengi we Martech Zone kwechinguva, iwe unoziva kuti ini ndaigona kushandisa zvakati wandei rubatsiro mubazi rekupepeta. Hazvirevi kuti ini handina basa nezviperengo uye girama, ndinoita. Dambudziko rakanyanya retsika. Kwemakore, ndanga ndichinyora nekutsikisa zvinyorwa zvedu pamhepo. Ivo havapfuure nematanho mazhinji ekubvumidzwa - ivo vanoongororwa, akanyorwa, uye akatsikiswa.
Nehurombo, izvo zvakandikonzera kumwe kunyara sezvo ini ndakaburitsa zvimwe zvisina musoro zvikanganiso zvegrama pamusoro pemakore. Ini ndato taura kune vamwe vedu vanyori vekunyora pamusoro pekuva navo pane chengetedzo kuti vaongorore zvandaitumira mazuva ese. Nekudaro, ini handidi kumirira kuti nditsikise saka ndanga ndichikuisa. Ndisingataure chokwadi chekuti ini ndingave ndisingade kuti mazano avo anoshandura sei matauriro ebasa rangu. Ini ndakadzivirira zvechokwadi kuenda munzira yekugadzirisa. Zvakare, ini ndinonyora zvinyorwa zvakawandisa zvekuti ini ndoda kuvandudza kuraira kwangu kweChirungu
Yakawanda Sei Grammar uye Spelling Zvikanganiso Zvinoitwa Nevanhu Kuita Pamhepo?
Handisi ndega! Grammarly akaongorora anopfuura mazwi bhiriyoni proofread neyakajairika yavo yekunyora kunyorera mukati memwedzi mumwe. Hezvino izvo zvavakawana:
Vanhu vakaita avhareji 39 zvikanganiso pamashoko zana mumasocial media posts. Emails anoteera nekutadza gumi nematatu pamazwi zana uye mablog mablog ndiwo akadzika kwazvo aine 100 zvikanganiso pamashoko zana.
Vanhu vane mukana wakapetwa katatu wekukanganisa mumasocial media posts kupfuura zvatiri mune chero imwe mhando yekunyora pamhepo. Ndiri kufungidzira zvimwe zveizvi zvine chekuita nekukanganisa kweTwitter (hapana edits) uye nemamiriro ekutaurirana enhau enhau.
Shiri dzekutanga dzichinyora pakati pa4: 00 mangwanani na8: 00 mangwanani dzakaitwa 18.2% mashoma zvikanganiso pane husiku husiku kunyora pakati pa10: 00 pm na2: 00 am. (Uh-oh)
Ndedzipi Ndidzo Dzidzo dzeGirama uye Zviperengo Zvikanganiso Vanhu Vanogadzira Pamhepo?
Apostrophe Zvikanganiso (semuenzaniso, ngatiitei vs. lets)
wo vs. To
nezuva vs. Mazuva ese
There vs. zvavo
pane vs. Zvadaro
Iwe unogona kunge uchiona kumwe kuvandudzwa munzvimbo ino, sezvo ini ndakaisa mari murezinesi regore re Grammarly, sevhisi yanga ichidaidzwa kunzi yekutarisisa girama yepasirese. Pedzisa newedzero yebrowser, ndinogona kukurumidza kunyora uye kugadzirisa zvikanganiso ndisina kumbosiya mupepeti wangu.
Grammarly: Iyo Yakanyanya Grammar uye Spelling Tarisa Platform
Grammarly ibasa randinogona kushandisa nechero chikuva kana software. Heano mimwe mienzaniso:
Grammarly Mupepeti - Grammarly's mupepeti inonakidza, ine spell-cheki, cheki girama, cheki yekunyepedzera, vateereri kurudziro, maitiro maitiro, kuverenga, kuona matauriro, chinangwa, kwakazara kurova, zvibodzwa, mazwi emazita, kudzoreredza, kushongedzwa kweshoko, kureba kwemutongo, nezvimwe.
Grammarly Desktop App - Grammarly ine yakamira yega application iyo inogona kumhanya pane chero inoshanda system. Iyo webhu-yakavakirwa chikuva uko iwe kwaunogona kuchengetedza dura rezvako zvese zvinyorwa zvako.
Grammarly yeIpad - Grammarly ine yakamira yega application iyo inogona kumhanya pane iyo iPad.
Grammarly Bhurawuza Kuwedzeredzwa - Grammarly ine inoshamisa browser yekuwedzera. Ndiri kushandisa iyo yekuwedzera yeSafari izvozvi mukati meWordPress 'Gutenberg mupepeti izvozvi pane ino chinyorwa. Chero peji rewebhu rine ndima yemavara inogonesa Grammarly kukubatsira. Uye kupfuura zvese, iwe unogona kuwana iko kwekutanga mashandiro pasina muripo!
Grammarly Hofisi Wedzera-Mu - Grammarly ine hofisi yekuwedzera-yeWindows kana Mac.
Grammarly Khibhodi - Kana iwe uri pane mbozhanhare, unogona kuisa uye kushandisa iyo Grammarly Khibhodi kuti ubatsire yako mbozha kopi.
Grammarly Bhizinesi - Kambani yako ine chaiwo manongedzo echitaira kana ichinyora? Grammarly Bhizinesi inoita kuti iwe ugone kutungamira wese ari mukati mekambani yako kutevedzera ako marongero.
Tanga Nayo Grammarly Yemahara
Maitiro Ekutarisa Grammar uye Spelling Zvikanganiso neGrama
Kushandisa Grammarly kuri nyore. Munzvimbo yemavara iwe yauri kushanda mairi, iwe uchaona zviperengo uye girama nyaya dzakataridzirwa. Dzvanya iyo Grammarly icon uye kumusoro pops imwe yakadzama mupepeti iyo iine ruzivo rwese rwaunoda kuti uvandudze kopi yako.
Heino vhidhiyo huru pamaitiro ekuti Grammarly inoshanda sei:
Kana izvo zvisina kukwana maficha kwauri, ko email yevhiki nevhiki yekukuzivisa iwe kuti uri kuita zvakanaka sei uchipesana nevamwe vashandisi veGramarly? Hongu, vanotumira imwe! Uye kwete, ini handisi kugovera yangu.
Ongorora: Ndiri kushandisa yangu Grammarly affiliate zvinongedzo mune ino yese posvo.
Tags: vateereri mazanomamirire ezvinhu zviperengozvishandiso zvekugadzirisaedhiyo maturusikukanganisa pamashoko zanachimiro chekizvinangwagrammargirama appkutarisa giramakuongorora giramamacheki giramachishandiso che gramazvinyoro-nyorochinangwamispellingsyakazara zvibodzwakubiridzira kunoongororanyora dzemutaurokuverengachiperengo-chekichipereterwaspellingchiperengo appchiperengo chekutarisachiperengokuona tonishokoizwi rakakoshakutadza kwemazwimazano emashoko
Jornaya Activate: Mu-Musika Kuongorora uye Maitiro Ekuzvibata kweMahara-Hupenyu Kutenga
Freshsales: Kukwezva, Shingairira, Vhara, uye Dzidzisa Kutungamira Kune Rako Bhizinesi Mune Imwe Yekutengesa Platform
Mar 24, 2016 pa 4: 22 PM
Ndiri kuzviyedza izvozvi. Pane chinhu chinoiudza kuti isaregedze mavara ehtml pane doc? Parizvino, pakunyorera webhu, ndinongofomata sezvandinoenda uye girama yekurudyi iri kuita zvinokwana, kunyanya kana Ichisvika pamazita.
Uye, grr, ichatsigira Google Drive riini?
Mar 25, 2016 pa 5: 45 PM
Google drive ichave yakanaka chimiro! Ini ndinongozviburitsa muGrama mune rangu gwaro.